Tan iyo markii la aasaasay ee daaqadaha OS users ayaa xaqiijiyey in Casharrada ku qoran yihiin si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah aqoon tahay waxaa loo dhiibaa si dadka kale. Hadda sida Microsoft OS la soo dhaafay sida Windows 10 dhow yahay iyo taariikhda furitanka ayaa lagu dhawaaqay in arrintan la xiriira waa 29-kii July 2015 taas oo aan sidaas daraaddeed aad u badan fog user .Waxaa mari lahaydeen dhex tutorial si ay u hubiyaan in ugu fiican ayaa lagu helay oo ka mid OS iyo inay ka adkaadaan nidaamka qaab. Waxa kale oo hubin doona in user helo in la ogaado shaqeynta xudunta u ah nidaamka aan wax arrintan iyo dhibaato. The talooyin guud ahaan waa mid aad u fudud in ay hirgeliyaan oo sidaas daraaddeed user Khasab ma aha in fuudh yeesho wheel si loo hubiyo in nidaamka la raaco habka ugu fiican. Waxaa sidoo kale ku taliyey in dhammaan dadka isticmaala si aad u hubiso in talooyin lagu dabaqo sida ay tallaabooyinka lagu xusay in ay helaan natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira.
15 talooyin ah ee sida loo maareeyo ku xijiyaan cusub oo ku saabsan daaqadaha 10
Ka dib waa 15 Talooyin in la hirgaliyo si loo hubiyo in daaqadaha 10 waxaa lagu addoonsada aqoon tayo leh iyo fasalka:
Si aad u hubiso in user helo ugu wanaagsan ee reer habkaani degdeg ah amarka waa in la furay iyo userpasswords2 weedha ah waa in la qoraa makiinad si loo hubiyo in sanduuqa dhanka ah password user ah si ay u helaan mishiinka waxaa laga saaray iyo nidaamka dib ayaa loo bilaabayaa sameeyo si ay shaqo ugu samayn hesho.
2. guryaha Tababaraha kooxda Task
Sidoo kale waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad u hubiso in tababaraha hawsha waxyooday faahfaahin dheeraad ah. Ctrl + Shift + muhiim ah ESC ay tahay in la sii adkeeyey si aad u hubiso in tababaraha hawsha loo heli. Faahfaahin dheeraad ah tab ka dibna in la riixi hoose si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo.
3. menu talooyin Start
User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in menu bilowga waxaa la heli iyo fursadaha yihiin navigated mid mid. Doorasho kasta oo la xaq u riixi kartaa si aad u hubiso in barnaamijka laga saaro liiska. Chine ayaa loo maarayn karo by jiita ama dhibic ama ay u qumman yihiin kuwa riixaya sida ay tahay habka ugu fudud ee sidaas samaynaya.
4. Quick helaan
User ayaa furi kara sahamisa file iyo hubi in ka dhigi kartaa in folder la iskula in ay helaan deg deg ah oo ay xaq u riixaya iyo xulashada pin in ay helaan deg deg ah
Maamulka 5. Ogeysiinta
User wuxuu hubin doonaa in icon ah farriimaha ayaa la riixi saxaarad habka iyo nidaamka Jidka gudahood ka dhigi kara> farriimaha iyo tallaabooyinka la doorto si loo hubiyo in goobaha wargelinta aan la heli kaliya laakiin sidoo kale waxa isbedelay.
Codsiyada waxaa la gudban ama vertical taagan karaa sida ay u baahan yihiin iyo aragtida user sida la doonayo. Codsiga waxaa guud ahaan geeddi-socodka waa wax fudud oo user xaqa u baahan yahay in wax miiran Wnkey + bidix ama Winkey + xaq ah si loo hubiyo in codsiyada lagu daweynayo:
7. aragtida Task
User wuxuu hubin doonaa in daaqadaha + tab furaha la isku soo riixayo in la hubiyo in daaqadaha waa la heli degdeg ah oo isticmaalka waqtiga ee guud waxaa uu hoos ugu yar ee ka dhigi kara. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ayaa sidoo kale isticmaali kartaa tilmaamaha mouse si loo hubiyo in uu furmo suuqa la soo xulay si fudud:
8. Xir hoos toobiye
User ayaa arrintan la xiriira u baahan tahay si ay u hubiyaan in habka ugu fudud ee la xiray waxaa la socda halkii adakaanayso in ay fursad u samaynta iyo hawsha adag. Habka ugu fudud gundhig gudahood Windows 10 waa in ay xaq u guji icon daaqadaha ka dibna dooro ikhtiyaarka ugu xidho:
Hab 9. Gacan-free
Codsiga cuntada iyo cabitaanka ee daaqadaha 10 sameeya shaqada iyo rakibo codsiga fudud ayaa loo baahan yahay in aad qabatid shaqada. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in gacanta maraqa wasakheeyey ah la ruxruxo hore ee camera ah si loo hubiyo in user xukunto nidaamka oo aan xataa u taabato,
10. barnaamijyadooda Soo afjarid
Waxaa by fog habka ugu fudud in la raaco yaabaa in la hubiyo in user helo ka mid ah arrinta gujinaya Aayad cross in ay xirto codsiga. Suuqa kala Codsiga waxaa kaliya in la jiido si hoose si aad u dhakhso xirto:
11. Boostada, heerka ku xiga
Si aad u aragto hyperlinks gundhig gudahood email ah oo uu soo diray user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in uu user kaliya Geeri mouse ka badan HyperLink si aad u hesho wixii kaloo sameeyey tayada iyo fasalka. Aragtiyaha SNAP ee IE samayn doonaa inta kale ee aan arin kasta:
Murayaad 12. Internet reading sahamisa
The dadka isticmaala ku jira caado ka mid ah akhriska articles online hubiyo in ay leeg- reading la heli si aad u hubiso in ay xayeysiis aan loo baahnayn oo laga saaray ka dhigi kara. Waxa la qaban karo, adigoo gujinaya icon Murayaad reading hoose:
13. Ku darista oo ay ka saareen walxood desktop
User ayaa arrintan la xiriira u baahan yahay si loo hubiyo in goobaha ay yihiin heli iyo calanka desktop Weedhan waxaa loo qoraa makiinad suuqa kala socda desktop goobaha icon waa in la riixi gudahood. Suuqa ayaa soo socda furi doonaa in hubiyaan in walxood oo waxaa lagu daray oo laga saaray desktop sida user ay u baahan tahay:
14. Pin goobaha gaarka ah si ay u bilaabaan menu
Desktop waa in ay xaq u riixi si ay u dejiyaan feature shaqsinimo ku saabsan. Goobaha gudahood user ay u baahan tahay in la hubiyo in goob waa inuu kan la iskula in menu bilowga waa xaq riixi iyo pin inuu ku soo bilowdo Bartan waxaa markaas soo xulay:
15. Helitaanka Apps ka xarafka ugu horeeya
Muddo menu bilowga baahida user guji oo dhan barnaamijyadooda si ay u hubiyaan in dadka isticmaala ay ka heli lahaayeen barnaamijyadooda ku qoran alphabetically. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in warqad la riixi si aad u hesho dhammaan codsiyada in ka bilowdo warqad gaar ah si aad u hesho arrinta la xalin ee style.
> Resource > Windows > 15 Talooyin inuu dad idinka dhigto Master of Windows 10